Ajụjụ - Anping County Hangtong Wiremesh Co., Ltd.
itinye ego 30% n'oge, 70% itule megidere B / L.
Ọnụahịa mbufe na-adabere n'ụdị ị họọrọ iji nweta ngwongwo. Express na-abụkarị ndị kacha ọsọ ọsọ mana ọ kachasị ọnụ ụzọ. Site na mmiri nke oke osimiri bu uzo kacha mma maka oke. Gharịrị udu mmiri enwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ọnụọgụ, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.